Home : Services : Find Specialist : News&Events : Promotion : Job Vacancy : Contact :
WELCOME To Bahosi Hospital
Bahosi Hospital isafree standing Multi-Disciplinary Specialist Centre located at Building no . 31-36,1-2, 5-6, and 37-38, Bahosi Housing Complex , Wardan Street , Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar. It isacomplex of6stories-4Building Hospital.Our mission is to provideacomprehensive cost effective health care delivery system. For the convenience of our patients,awide range of services are made easily accessible within the complex, making thisaone stop Hospital.
This Bahosi Hospital is founded by Pioneer Services International Company Limited since 1st July 1994.PSI Co., Ltd. is organized byagroup of prominent medical specialists in various disciplines, medical technologists and business entrepreneurs of Myanmar, withaview to developaquality health care system in private sectors.
ဗဟိုရ်စည် ဆေးရုံမှ နွေးထွေးလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
ဗဟိုရ်စည်ဆေးရုံကို (၁၉၉၄) ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး “လူသားအားလုံး ကျန်းမာစေချင်သည့် ဗဟိုရ်စည် (Health for All) ” ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် လူနာများအား ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများပေးလျှက် ရှိပါသည်။ ဗဟိုရ်စည်ဆေးရုံသည် ခုတင် (၁၈၀) ဆေးရုံဖြစ်ပြီး လမ်းမတော်မြို့နယ် ၊ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းလမ်းနှင့် ၀ါးတန်းလမ်းထောင့်ရှိ ဗဟိုစည်ရ် အိမ်ယာဝင်းအတွင်း တည်ရှိပါသည်။ ၀ါးတန်းလမ်းဘက်မှ ၀င်လိုက်သည်နှင့် ပေါ်တီကိုအောက်တွင် အသင့်စောင့်ဆိုင်းနေသော လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသည့် ၀န်ထမ်းများမှ ခရီးဦးကြိုပြုပါသည်။ လူနာအား ကူ၍တွဲကာ OPD(ပြင်ပလူနာ) ပြသမည့်သူဆိုလျှင် ဘယ်ဘက်အဆောက်အဦး (Building B) သို့သွားရန် ၊ ဆေးရုံတက်မည့် လူနာဖြစ်ပါက ညာဘက်အဆောက်အဦး (Building-A) သို့သွားရန် လိုက်လံပို့ဆောင် ညွှန်ပြပေးပါသည်။ကားမောင်းသူကို အဆင်ပြေစွာ ယာဉ်ရပ်နားနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးပါသည်။
ဘယ်ဘက်အဆောက်ဦး (Building-B) ၀င်ဝင်ချင်းတွင် ဧည့်ကြိုဌာန (Reception) ရှိပါသည်။မည်သည့် အထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့် ပြသလိုသည်ကိုပြော၍ မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။မိမိတွေ့ဆုံလိုသော အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ ရှိ /မရှိ ၊ မည်သည့် အချိန်တွင် ရှိသည်တို့ကို မေးမြန်း၍ ဘွတ်ကင်(Booking) ယူနိုင်ပါသည်။ ဖုန်းဖြင့်ကြိုဆက်၍ ဘွတ်ကင်ယူသူများလည်း ရှိပါသည်။ မိမိတွေ့ဆုံလိုသော ဆရာဝန်ကြီးရှိပါက ဆရာဝန်ကြီးရှိရာ အထပ်သို့ ညွှန်ပြပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Home | Services | Find specialist | News&Events | Promotion | Job Vacancy | Contact